सिराइचुलीको फेदीदेखि सुनौलो बजारसम्म [स्मृतिबिम्ब] | चितवन पोष्ट दैनिक
सिराइचुलीको फेदीदेखि सुनौलो बजारसम्म [स्मृतिबिम्ब]
२०७८ बैशाख ४, शनिबार ११:२७ गते
समय धेरै बलवान् छ । समयको गर्तमा पग्लेर नबिलाउने वस्तु यस दुनियाँमा कहीँ केही छैन । हाम्रा स्मृतिहरु पनि समयको जति लामो फासलामा बेरिन्छन् तिनका आकृतिहरु पनि त्यही अनुपातमा पातला र अस्पष्ट हुन जान्छन् । फेरि, समय मानौँ सधैँ एकै ठाउँमा बसिरहेको छ कि झैँ गरी त्यो एकनासले निरन्तर अघि बढिरहेको हुन्छ अविच्छिन्नरुपमा, अदृश्य धागाको लट्टाइमा बेरिँदै । यसको विचित्रता बयान गरी नसक्नु छ ।
अस्ति भर्खरजस्तो लाग्छ, एउटी नवविवाहिता नारीले जन्मघरलाई छोडेर पराईघर जाँदाको पहिलो मुहूर्तमा मटुुभित्र लुकाएको दर्द र वेदनाको भारीलाई आँसुका भलले छेक्तै परको बाटोतिर लागेझैँ मैले यस धरतीलाई पहिलोपटक स्पर्श गरेको, सबभन्दा पहिले आँखा खोलेर यो संसार चियाएको मेरो प्यारो जन्मभूमि, मेरो पहाडघरसित बिदा भएर अज्ञात गन्तव्यको खोजीमा घरबाट बाहिरिएको ।
साढे पाँच दशकभन्दाअघिको त्यो समय र अहिलेको समयको अनुहारमा बोलीचालीको भाषामा भन्ने गरिएको आकाश–पातालको भिन्नता भनिएजस्तै फरक छ । अहिले भोर्लेटार र कर्पुटारको रामबजारसम्म पिच गरिएको पक्की बाटोबाट मोटरगाडीमा गुड्दै घर जान पाइन्छ । काल्ढुङ्गासम्म नै चलेको छ काठमाण्डूबाट नियमित बससेवा । त्यही भेक हुँदै दाङ्सिमराङ्, हंसपुर, सौरबास, तालबेसीको बाटो सुन्दरेडाँडा चढेर पोखरा पुग्छ बस । यता, लमजुङतिरका लेकलेकमा समेत गुड्छन् गाडीका पाङ्ग्रा आजकल । तर, त्यो बेलाको कुरा अर्कै थियो ।
२०२० पुस महिनाको अन्तिम हप्ताको कुनै एकदिन रामेश्वर दाजुको पछि लागेर मधेसको बाटो समातेको थिएँ मैले । यतिबेलाको जस्तो क्षतविक्षत थिएन धरती । प्रदूषण थिएन । यात्रा कठिन थियो, तर त्यो स्नेहमयी थियो । मूल बाटोमा नुन–तेल बोक्ने मानिसहरु हिँड्दाहिँड्दै बाटामा जहाँनेर साँझ पर्छ त्यहीँ भारी बिसाएर रुखको फेदका सियाँलमा बास बस्थे, त्यहीँ चुलाका चम्का जोड्थे । फुक्काफालहरुका लागि ठाउँठाउँमा देख्तैमा बसूँबसूँ लाग्ने खालका भट्टी पसलहरु थिए, थकालीका । त्यही परिवेशमा, घरबाट निस्केपछि कुनामुख, साँगुमुख, दर्गाम, बिर्दीफाँट हुँदै जहरेको कुलोमा उक्लिएपछि पोल्याङ कटेर सिसाघाटबाट मादी तरेका हामी दुलेपानी, तीनजरे, छाब्दीबराह, केशवटार, सुखौराफाँट छिचोलेर सिमपानी र धरमपानी कटेपछि साराङघामा दोस्रो बास बसेर तेस्रो दिनको कलिलो बिहानीपख सिस्नेखोला कटेर सिन्चाङगढी उक्लेका थियौँ । सिन्चाङगढीको चौतारामा उभिएर अगाडितिर हेर्दा मेरो मन पहिलोपल्ट धेरै प्रफुल्ल भएको थियो ।
अगाडि अनन्त आकाशतिर हुत्तिएर पूर्व–पश्चिम लमतन्न तेर्सिएका महाभारत शृङ्खलाका पर्वतमाला थिए र तिनै पर्वतमालाको पूर्व कुनामा माउ कुखुरीले चल्ला ढाकेझैँ ससाना पर्वतका लहरहरुलाई आफ्नो काखमा च्यापेर तुवाँलोको घुर्मैलो च्यादर ओढेर ध्यानमुद्रामा बसेको योगीझैँ अटल, स्थिर बसिरहेको थियो सिराइचुली । तल खोँचमा नीलो अगाध जलराशिलाई आफूभित्र समाहित गरेर सेती, मादी, मस्र्याङ्दी, बूढीगण्डकी र त्रिशूलीको संयुक्त स्वरुप गण्डकी शान्त मुद्रा अनि सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको थियो । नयाँ संसारको नयाँ चित्र थियो त्यो मेरा लागि । मन हर्षले गद्गद भयो । चौताराबाट उठेर तल झर्ने गोरेटो बाटोमा कदम बढाउनुअघि मैले एकपटक पछाडि फर्केर हेरेँ, मेरो प्यारो गाउँघर त्यतिबेलासम्म मबाट धेरै पर छुटिसकेको थियो । मनै भरङ्ग भएर आयो ।
हाम्रा दुई पाई थिए त्यति बेला, गाम र बेँसी । बस्नका लागि स्वर्गजस्तै थियो हाम्रो गाउँ । चार जात छत्तीस वर्णको एउटा सुन्दर फूलबारीजस्तै । बेँसीमा गोठ, बस्तुभाउ र खेतीपाती थिए हाम्रा । सानो बालक छँदा कतिपटक म आमाको पछि लागेर बेँसी झर्न खोज्थेँ, आमा मलाई हर तरहले फकाइफुल्याई गरेर घरै बस्न लगाउनुहुन्थ्यो र श्रमकी पूजारी आफू वस्तुभाउ, खेतीपातीलगायतका हरेक जिम्मेवारी निभाउन बेसीँतिर झर्नुहुन्थ्यो । घरमा एक्लो छोडिएको म कहिले खुरूक्कै मान्थेँ, कहिले भने घरदेखि निकै पर कमरकटेसम्म रूँदै आमाको पछि लागेर जान्थेँ । तर, आमाका लामा फड्कालाई जति नै दौडँदा पनि भेट्न नसक्ने मेरा साना खुट्टी माताको बिछोडलाई सहन विवश हुन्थे र म मेरा बाल वेदनाका अनेक दुःखहरुलाई घुँक्कघुँक्क गर्दै आँसुका भलमा मिसाएर बगाउन विवश हुन्थेँ ।
आमाको त्यतिविध्न प्यारो छोरो म, आमाले किन, कतिबेला मलाई सदाका लागि छाडेर मबाट विलुप्त हुनुभयो भन्ने राम्ररी बुझ्न सक्नेसम्म पनि हुन नपाउँदै म एक्लो भएँ । सात दशकअघिको मेरो हृदयको कुनामा लागेको घाउ मेरो दिलको छेउकुनामा कतैतिर घोचेर कहिलेकाहीँ आजपर्यन्त पनि चसचस दुख्छ ।
मैले एकपटक फेरि पछाडि फर्केर हेरेँ । मेरी आमाजस्तै मेरो प्यारो घरआँगन, मेरो गाउँघर र मेरा बन्धुबान्धव, इष्टमित्र, साथीसँगाती, बाटोघाटो, मेरो सेरोफेरो ती सबै मबाट धेरै पछि छुटिसकेका थिए । मेरो मन भित्रभित्रै आत्तिएर रोयो । म त्यसैत्यसै निसासिएँ । मेरो मनोभाव बुझेका दाजु मलाई घरीघरी सम्झाउनुहुन्थ्यो । म टोलाएको देखेर हुन सक्छ उहाँले ‘हरि !’ भनेपछि म एकपटक झसङ्ग हुन्थेँ र त्यसपछि उहाँका पदचापलाई पछ्याउँदै गोरेटो बाटो समातेर तलतिर झर्थें ।
त्यतिबेला रामेश्वर दाजु शक्तिखोरको चतुर्मुखी प्राइमरी स्कुलको हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो । सिन्चाङगढीको चौताराबाट दक्षिणपूर्वमा मैले देखेको महाभारत पर्वत शृङ्खलाको त्यही गगनचुम्बी शिखर सिराइचुलीको फेदीमा थिएँ म यतिबेला । तल चितवनको उष्ण र उर्वर, समथर भूमि थियो र थियो त्यसको दक्षिणी भेकमा पूर्व–पश्चिम लमतन्न सुतेको शिवालिक पर्वत शृङ्खलालाई आफैँभित्र समाहित गरेर फैलिएको चारकोशे जङ्गल । माथि महाभारत शृङ्खलाका अनकन्टार अनुर्वर डाँडाकाँडामा थिए जङ्गलका गिठा–भ्याकुरसित एकबारको जुनीको सौदा गरिरहेका अल्पसंख्यक चेपाङ जातिका मनुवाहरु जसलाई सुखी जीवनको परिभाषा भनेको हरेक दिन एक आँत खान पुग्ने जङ्गली कन्दमूलको सहज उपलब्धता थियो ।
त्यसका केही सुगम बस्तीहरुमा थिए मधेसमा मौजा भएका जमिनदार खलक । मलेरिया इराडिकेसन कार्यक्रम सञ्चालनपछि तल भित्री मधेसको बसाइँमा आफूलाई बिस्तारै अभ्यस्त बनाउन प्रयत्नरत ठालुहरु थिए ती । त्यही सिराइचुलीको पल्लोपट्टिको भेकको ठाउँठाउँमा तुलनात्मकरुपमा सहज जीवनयापन गरिरहेका ब्राह्मण, क्षेत्रीय आदि जातका मानिसहरुको पातलो बस्ती थियो । पृथ्वी राजमार्ग खुलेपछि त्यसको किनारैकिनार गाडीमा गुड्नुभन्दा बाहेक मैले अर्को कुनै अवसर पाएको छैन, त्यहाँको जनजीवनसित प्रत्यक्षरुपमा एकाकार हुन ।
पाँच/छ दिनजति दाजु रामेश्वर खनालको पाहुना भएर बसेपछि एकदिनपूर्व चितवनको लोथर खोलाको दायाँ काखमा रहेको महादेवटारमा पढाएर बस्ने उहाँका सहोदर भाइ, मेरा दाजु केदारनाथ खनाललाई भेट्न जाने भन्दै रामेश्वर दाजुले मलाई त्यता लिएर जानुभयो । शक्तिखोरबाट जुटपानीलगायत बाटामा पर्ने अनेक गाउँहरु हुँदै पैदलै हिँडेर रत्ननगर टाँडीसम्मको लामो दूरी तय गरेपछि बल्ल चढ्न पाइएको थियो गाडी । एनपीएमएसका गाडीको सेवा सुलभ थियो त्यतिबेला । तेल बोक्ने ट्याङ्करहरु, सामान बोक्ने लरीहरु र ट्रकहरु अनि तीभन्दा साना खाले सरकारी गाडीहरु । तिनैको बाहुल्य थियो त्यतिबेला । मानिसहरु सडकमा गुडेका गाडीहरुलाई देखेर घरी ट्रक आयो, घरी बस, घरी ट्याङ्कर आयो, घरी जिप र घरी कार आयो भन्थे, तर सुरूका केही दिनसम्म मलाई ती अनेकथरी वाहनका बीचको भिन्नता थाहा थिएन । मेरा लागि ती सबै मोटरगाडी थिए ।।
महादेवटारमा रामेश्वर दाजु एक रात हामीसँगै बस्नुभयो र भोलिपल्ट शक्तिखोर फर्कनुभयो । त्यसपछि म केदार दाइसित उहाँकै पाहुना लागेर बसेँँ केही दिन । म दाइसँगै स्कुल जान्थेँ । दाइकै स्कुलमा दुई–चार दिन दाइसितै मिलेर मैले पनि पढाउन थालेँ ।
त्यसको केही दिनपछि एकदिन मलाई भण्डाराबाट बोलाउन मान्छे आए । म र केदार दाजु बिहान सँगै भण्डारा गयौँ । दीपकान्त पाठक, टोपनाथ पाठकहरुको गाउँ कछारको त्यही शृङ्खलामा रहेछ । पाठकहरु नै हुमपुङ नाम गरेको त्यतिबेला धादिङ जिल्लाअन्तर्गत पर्ने त्यस गाउँका मुखिया, ठूलाठालु रहेछन् । हामीले बिहानको खाना टोपनाथ पाठकका घरमा खायौँ । मलाई त्यो पहाडी गाउँमा हेडमास्टर बनाएर लाने कुरा तय भयो । मैले त्यतिबेला आठ कक्षा पास गरेको थिएँ । भर्खर सत्र वर्ष पुगेर अठारमा प्रवेश गरेको, किशोर वयमा नै थिएँ म । महिनाको ७५ रूपियाँ तलब, खानपिन र बसोबासको व्यवस्था उहाँहरुले नै गर्ने भएपछि म फुरूङ्गै परेको थिएँ । तीस रूपियाँ चाँदीका सिक्कावाला मोरू लिएर घरबाट निस्केको मलाई महिनाको तलबकै रुपमा त्यति धेरै रकम पाउने भएको हुनाले मेरा लागि त्यो एउटा ठूलो अवसर प्राप्त भएजस्तो लागेको थियो ।
हामी खाना खाएपछि भण्डाराबाट पहाड जान त्यही दिन प्रस्थान ग¥यौँ । भण्डारा बजारबाट उत्तर लागेर घाँटुका बोटले ढाकिएको चउर कटेपछि सुरू हुन्छ सालघारी । त्यही सालघारी बीचबाट उत्तरपूर्वतिर लागेको छ त्यस भेगको कछारका मानिसहरु हिउँद, बर्खा मधेस–पहाड गर्ने गोरेटो बाटो ।
हामी तीन जना थियौँ । केही पर पुगेपछि उतै जाँदै गरेका दुई जना युवकसित भेट भयो । घना जङ्गलको बाटो हिँड्नुछ, सहयात्री भेट हुँदा स्वाभाविकरुपमा रमाइलो लाग्यो । म एक जना सानो किशोर भएको र नयाँ ठाउँमा जानका लागि नयाँ मानिसहरुसित सँगै हिँडिरहेको हुनाले किन्तिच सङ्कोच पनि लागिरहेको थियो, तर मेरा साथमा त्यही दिनदेखि बनेका मेरा अभिभावकहरु पनि भएको हुनाले म आस्वस्त नै थिएँ । मेरा साथीहरुसमेत ती दुई जना नवागन्तुकहरु गफगाफ र भलाकुसारी गर्दै हिँडिरहेका थिए । अत्यन्तै फरासिला तिनीहरु सुरूमा सहयोगी लागेका थिए । हामीहरु जतिजति अनुपातमा जङ्गलको भित्रीभागतिर गइरहेका थियौँ त्यही अनुपातमा पछि गएर उनीहरु अनेक प्रकारका डरलाग्दा गफ निकाल्न थाले । जङ्गलमा लुटिएका, चोरले मान्छे काटेका त्यस्तै गफ लडाएर हाम्रो सातो लिन थालेका थिए, ती नयाँ मानिसहरुले । झन्डै आधा बाटो काटेपछि जङ्गलको बीचमा फिँजारिएको एउटा बगरे खोलामा पुगियो । ती दुई जनामध्ये एउटाचाहिँ पहिल्यैदेखि बटारिन थालेको थियो । मेरा अभिभावकहरु त्यसलाई शान्त पार्न नरम स्वरमा कुरा गर्न प्रयत्न गर्थे, तर त्यसले सुन्न छाडेको थियो । देशले २०१८ सालको घटना बेहोरेको धेरै लामो समय भएको थिएन । ठाउँठाउँमा लुटपाट, सेनाको दमन यस्तै किंवदन्तीजस्ता कुरा सुनिन्थे त्यसताका । यी पनि तिनैमध्येका हुन् कि भन्ने आसङ्का उब्जन थालेको थियो हाम्रा मनमा ।
सु गर्ने निहुँले खोलातिर लागेको तीमध्येको एक जना खोलाको किनारमा ढुङ्गामा खुकुरी उद्याउन थाल्यो । हामी उसलाई देखेको नदेख्यै गरी लगातार हिँडिरहेका थियौँ । हाम्रो मनमा डरको मात्रा तुलनात्मकरुपमा बढ्दै गएको थियो । हामी छिटोछिटो पाइला चाल्न थालेका थियौँ । त्यही समयमा विपरीत दिशाबाट एक हुन मानिस हामीतिर आइरहेको देख्यौँ । बल्ल हाम्रो सास आयो ।
साथीलाई पर्खेर बसेको अर्को पनि उतै छलियो । हामी सकेसम्म छिटो अगाडि बढ्यौँ । त्यसको केही समयपछि लोथर खोलाको किनारमा रहेको खेत र पारि डाँडाको काखमा रहेको सिलिङ्गे गाउँ देखियो । हामी जङ्गल कटेर तल फाँटफाँटै केही बेर हिँडेपछि लोथर र चात्राङखोलाको दोभानबाट माथितिर लाग्यौँ । अब हाम्रो देब्रेतिर माथि कछारतिरबाट झरेको लोथर खोलो र दाहिनेतिर चात्राङखोलो, दुइटा खोला थिए । हामी तिनै खोलाको दोभानमाथिको अलिकति टारी खेत कटेर ठाँटीनेरबाट गाउँ जाने बाटो समातेर उकालो लाग्यौँ ।
लगभग आधा घन्टा ठाडो उकालो हिँडेपछि हामी निकै उचाइमा रहेको एउटा टारजस्तो उच्च भूमिमा पुग्यौँ । पुछारतिर ठूल्ठूला गरा भएको पाखो बारी र त्यसको माथिपट्टि काखतिर बीस–पच्चीसवटा घरहरु सहितको सानु बस्ती । त्यही थियो त्यसदिनको हाम्रो गन्तव्य, बाहुनहरुको बाहुल्य भएको हुमपुङ गाउँ जहाँ म त्यस भेगका बालबालिकाहरुलाई शिक्षाको उज्यालोबाट प्रज्वलित गराउने उद्देश्य तथा अभिभारासहित एउटा शिक्षकका रुपमा त्यस ठाउँमा पदार्पण गरेको थिएँ ।
तीनथरीका मानिसहरुको बसोबास रहेछ त्यहाँ । पाठकहरु, उप्रेतीहरु र नहर्कीहरु । मेरो लागि त्यहाँ पुगेको दिनदेखि नै दीपकान्त पाठकका कान्छा भाइ फणीन्द्र पाठककोे घरमा उनीहरुकै भान्छामा खाने गरी बसोबासको व्यवस्था मिलाइयो । गाउँको पश्चिमी भेकमा धमगैरा भन्ने ठाउँमा अलिकति होचो पाखोबारीजस्तो ठूलो गराको पूर्वी किनारमा खरले छाएको धन्सारजस्तो एउटा घर थियो । त्यही नै थियो त्यहाँको स्कुल । म बिहान विद्यार्थीहरुसँगै स्कुल जान्थेँ र बेलुका चार बजेपछि उनीहरु सँगसँगै फर्कन्थेँ । माथि तिरूवा भन्ने गाउँ थियो । त्यहाँ केही घर वलीहरुसँगै तामाङ बस्ती थियो अनि त्यहाँबाट समेत विद्यार्थीहरु आउँथे धमगैरा स्कुलमा । कति विद्यार्थीहरु त मभन्दा पनि ठूला थिए । स्कुलमा म एक जनामात्रै शिक्षक थिएँ, आफैँ सर्वेसर्वा हेडमास्टर थिएँ ।
स्कुलबाट फर्केपछि घरमा जे तयार छ त्यही खाजा खान पाइन्थ्यो । कहिले खट्टे, कहिले भुटेका मकै यस्तै खाइन्थ्यो । साँझ–बिहान भात । म बिहान–बेलुका घरका केटाकेटीहरु पढाउँथेँ, सायद खान–बस्नका खातिर मैले गर्नु परेको अतिरिक्त श्रम हुँदो हो त्यो । चिउरीको घिउका डल्ला पनि खुबै खाइयो, भुटेका मकैका फुलसित । केही समयपछि मलाई गाउँका धनाढ्य महेश्वर पाठकका जेठा छोरा टडकराजको घरमा बस्ने व्यवस्था मिलाइयो । खानाको व्यवस्थाचाहिँ उनकै कान्छा छोरा टोपनाथका भान्छामा खाने व्यवस्था मिलाइएको रहेछ ।
म जहाँ बसे पनि जहाँ खाए पनि म त्यहाँ रहुन्जेल उनीहरुले मलाई आफ्नै छोरालाई जस्तै माया गरेर राखे । तथापि, सानैमा आफ्नो गाउँघर, आफ्ना इष्टमित्र र साथीसँगाती छोडेर दूरदराजको त्यस ठाउँमा बस्नु परेकोमा मेरो आन्तरिक मनमा कतै पीडाको अनुभूति हुँदो हो सायद । त्यसैले त्यहीँ बस्दा मैले आफ्नो पुरानो गाउँ, आफ्ना साथीभाइ, इष्टमित्र, चाडपर्व आदि विषयमा कविता कोरेँ जसलाई मैले भरतपुर पुगेको केही वर्षपछि २०२४ सालमा ‘बिदा हुँदा’ शीर्षकमा पुस्तकाकारमा प्रकाशित गरेँ ।
म बसेको गाउँको पश्चिमतिर लोथर खोलापारि पूर्वपश्चिम तेर्सिएर फैलिएको एउटा डाँडो थियो । त्यसको पशिचम थाप्लोमा चारकिल्ला नाम भएको एउटा गाउँ थियो जहाँ पोखरातिरबाट गएका एक जना शिक्षक थिए भन्ने सुनेको थिएँ मैले । तिनको नाम अहिले बिर्सें ।
त्यतिबेला धादिङ जिल्लामा पर्ने दूरदराजको अनकन्टार गाउँ हुमपुङमा बस्दा अत्यास लागेको समयमा म कहिलेकाहीँ साथी पाउँदा तल महादेवटारमा बस्ने आफ्नी ठूलीआमाका छोरा केदार दाइलाई भेट्न केही दिनको छुट्टी लिएर तल झर्थेँ । पिप्ले, प्रतापपुर, सुनाचुरी हाम्रा कहिलेकाहीँका गन्तव्य हुन्थे । (मधेस आन्दोलन चर्किएको बेला त्यही विषयवस्तुलाई समेटेर मैले ‘प्रतापपुरको छातीमा रगतको छिर्का’ शीर्षकमा एउटा कथा लेखेको थिएँ । शीर्षक चयनमा त्यतिबेलादेखिको मेरो मनमा लुकेर, टाँसिएर बसेको त्यही बस्तीको, त्यही गाउँको स्मृति बिम्बित भएको हुन सक्छ मेरो हृदयमा जसलाई डा. शान्तिमाया गिरीले आफ्नो पिएचडी थेसिसमा र पछि पुस्तकाकार ग्रन्थका रुपमा प्रकाशित ‘कथामा अभिघात’मा समेत मह¤वका साथ उल्लेख गरेकी छन् ।)
हिउँदको समयमा लोथर खोलाको किनारैकिनार पनि मानिसहरु आउने–जाने गर्थे । त्यो विकट बाटो हुँदै म कतिपटक त एक्लै पनि ओहोरदोहोर गर्ने गर्थें त्यतिबेला । त्यहाँका तामाङहरु श्रमशक्ति बेच्थे धनीमानी बाहुनहरुका लागि र अन्न उब्जाउँथे । चेपाङहरु भुराहरुलाई स्कुलसम्म पनि पठाउने कुरा सोच्दैनथे । जङ्गलमै बनिबुतो गर्नु उनीहरुको दैनन्दिनी थियो ।
आपूm शिक्षक भएको वर्षपछि २०२१ साल पुस महिनामा सरकारी आर्थिक सहायता लिन म धादिङको सदरमुकाम सुनौला बजार जानुपर्ने भयो । मुक्तिनाथ उप्रेती थिए हाम्रो स्कुलका कोषाध्यक्ष । उनकै साथ लागेर म धादिङ जान हिँडेँ । लोथरखोलाको किनारैकिनार, पत्रे चट्टानका ओडारजस्ता अजङका ढुङ्गाहरुलाई पछि धकेल्दै हामी कान्द्राङगढी कटेर तल झ¥यौँ । ताल्ती खोलाको तीरैतीर हिँडेर फेरि माथि छेवाङ पुग्यौँ र एक रात त्यहीँ बसेर भोलिपल्ट गजुरी हुँदै त्रिशूलीमा डुङ्गा चढेर जीवनपुरको काखमा कुल्चँदै सुन्दर बजार उक्लियौँ ।
पृथ्वी राजमार्ग पछि बन्यो । नारायणगढ–मुग्लिन–गोर्खा सडक पनि बन्यो, तर बाटो सधैँ धरापका रुपमा रह्यो । विगतका वर्षहरुमा मुग्लिन–नारायणगढ मार्गको स्तरोन्नतिका लागि काम हुँदाहुँदै कैयौँ दुर्घटनाहरु भए । बर्खाका समयमा स्थिति झन् भयावह बन्दै गयो । विकल्प खोज्ने प्रयत्नहरु पनि भए । त्यसै क्रममा मैले त्यतिबेला एकदिन कान्तिपुर दैनिकका नाममा यस्तो पत्र लेखेँ, जसलाई उसले आफ्नो पत्रिकामा ससम्मान स्थान प्रदान ग¥यो, त्यो पत्र यस्तो थियो :
मुग्लिन–नारायणगढ मार्गको दीर्घकालीन विकल्प
मुग्लिन–नारायणगढ मार्गको दीर्घकालीन वैकल्पिक मार्गका रुपमा पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने रिचोकटारबाट दक्षिणतिर ताल्तीखोलाको किनारैकिनार कान्द्राङगढीको गल्छीजस्तो भूभाग कटेर पारिपट्टि लोथरखोलाको किनारैकिनार चारकिल्ला हु“दै भण्डारा पुग्ने मार्ग निर्माण गर्ने हो भने यो मार्ग सर्वप्रथम चितवन र आधारभूतरुपमा सम्पूर्ण पश्चिम तराईसित राजधानीलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको अति उत्तम विकल्प हुन सक्छ । यो क्षेत्रमा धेरै ठूला पहाड र ठूला नदी दुवै नपर्ने भएको हुनाले ठूला पुल निर्माण गर्न र अजङका पहाड उधिनेर सुरूङ निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि पर्दैन । यदि यो क्षेत्रबाट वैकल्पिक मार्गका रुपमा त्यस्तो मार्ग निर्माण गर्ने हो भने धादिङको दक्षिणी भेगलगायत चितवनको महाभारत रेञ्जमा बसोबास गर्दै आएका प्रजाजाति (चेपाङ) बाहुल्य पिछडिएका बस्ती र गाउ“घरहरुमा पनि आमूल परिवर्तन आउन सक्छ ।
अहिले समस्या परेका बेलामा यसले हाम्रो माग तत्कालै पूरा गर्न नसक्ने भए पनि भोलिको नेपालको नवनिर्माणका लागि यो एउटा विशिष्ट उपलब्धि हुन सक्छ । सरकार र निर्माण कार्यको जिम्मा लिएर बसेका सम्बन्धित निकायहरुले यस विषयमा एकपटक सोचे कति सुन्दर हुनेथियो होला ? भारतलाई समेत लक्षमा राखेर चीनतर्फको आगमनलाई सुगम बनाउने आन्तरिक उद्देश्यसहित निर्माणाधीन स्याफ्रुबेँसी सडकले समेत यसको उपादेयता समयमा नै बुझ्नसके र जा“गरिला विवेकशील निर्माण कम्पनीहरुले काम समात्न पाए भने दिल्ली धेरै दूर छैन भनेजस्तै यो वैकल्पिक राजमार्गको निर्माण पनि केही समयभित्रै गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
(हरिहर खनाल, भरतपुर, चितवन, हाल : धापासी, काठमाडौँ)
काठमाडौँसित तराईलाई जोड्ने हाल निर्माणाधीन द्रुतमार्गले गर्नेजस्तै काम चितवन, पश्चिम नेपालको तराई र भारतसित जोड्ने दोस्रो प्रस्थानबिन्दु मलेखु–भण्डारा लोकमार्ग हुन सक्छ । सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री छ“दा त्यस कार्यलाई समेत केही बजेट छुट्टयाएर केही काम अघि बढाएको समेत मैले सुनेको छु । जुन ठाउँको विकास गर्ने हो त्यसको पहलकदमी त्यही ठाउँका जनता र जनप्रतिनिधिहरुले नलिएसम्म हाम्रा सपनाहरुले मूर्तरुप लिन सक्तैनन् भन्ने कुरामा हामी सबै जानकार नै छौँ । तर, निर्माणका नाममा हाम्रा पहाडहरु, नदीनाला र गाउँघरको चीरहरण गर्ने काम गर्न पाइँदैन । मलेखु–भण्डारा मार्ग सुव्यवस्थितरुपमा निर्माण हुनुपर्छ, तर महाभारत शृङ्खलामा पर्ने पहाडी गाउँघर तथा ऐतिहासिक धरोहरहरुको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि ठाउँठाउँमा सुविधासम्पन्न होमस्टे खोलेर त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरुको जीवनस्तर उकास्न हामी सदा प्रयत्नशील रहनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु ।
पहिलेको समयमा दूरदराजको खोँच मुग्लिन आज व्यापारिक केन्द्र बन्न पुगेको छ । चेरेसदेखि मनकामना पु¥याउन केबुलकारले केही मिनेटको मात्रै समय लिन्छ । त्यसरी नै कुरिनटारदेखि सिराइचुलीतिरको यात्रालाई सुगम बनाउनेतिर चालिने कदम पनि एकदिन सुरू हुनेछ भन्ने आशा एवम् विश्वास गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा, यस आलेखको शीर्षकलाई पुष्टि गर्ने ध्येयले पनि म यहाँनेर सुनौलो बजारको सानु प्रसङ्ग उल्लेख गर्न चाहन्छु । त्यतिबेला (२०२०/२०२१ सालतिर) सरकारले स्कुलहरुलाई तीन श्रेणीमा विभाजन गरेको थियो– १ द्येखि पाँच कक्षासम्म प्राथमिक विद्यालय, आठ कक्षासम्म निम्न माध्यमिक विद्यालय र दस कक्षासम्म माध्यमिक विद्यालयको प्रचलन थियो त्यतिबेला, जो धेरै कालसम्म कायम रह्यो । त्यहीअनुरुप तिनीहरुले वार्षिकरुपमा क्रमशः नौ सय, अठार सय र सत्ताइस सय आर्थिक सहायता पाउँथे ।
कतिपय ठाउँका आपूmलाई टाठाबाठा ठान्ने गाउँकै मान्छेहरुले नक्कली शिक्षक खडा गरेर आर्थिक सहायता लिएर त्यो आफैँ खान्थे भन्ने पनि सुनिन्थ्यो । भर्खर अठार कटेर उन्नाइस वर्षमा हिँड्दै गरेको सानो कदको मलाई सानै देखेर सरकारी अधिकारीहरुले सुरूमा कतै म पनि त्यसरी नै गाउँलेहरुले केही दिनका लागि सिँगारेर लगेको शिक्षक पो हो कि भन्ने ठानेछन् र सुरूमा उनीहरुले हामीलाई आर्थिक सहायता दिन गाह्रो माने । म परेँ फसादमा ।
त्यतिबेला मिस्टर हरिबहादुर थापा धादिङ जिल्ला पञ्चायतका सभापति रहेछन् । उनैले मेरो अन्तर्वार्ता लिए । मेरो घर सोधे । मैले पोखरा हो भनेपछि चन्द्रसिंह गुरूङलाई चिनेका छौ ? भनेर सोधे । मैले मान्छे देखेको छु र चिनेको पनि छु, तर उहाँले मलाई चिन्नुहुन्न भन्ने उत्तर दिएँ । यसरी अनेकथरीका प्रश्नहरु सोधिसकेपछि म सक्कली शिक्षक नै थिएँ भन्ने उनले ठह¥याए र उनले नै मलाई आर्थिक सहायता दिलाए । (त्यो कुराको प्रसङ्ग उनी सुकुमबासी आयोगको अध्यक्ष भएर भरतपुर आएको समयमा मैले उनीसित भएको भेटमा स्मरण गराउन खोजेँ, तर त्यो घटना मेरो लागि पो मह¤वपूर्ण थियो र मेरो स्मृतिमा बसि पनि रह्यो, उनले त्यसलाई बिर्सिसकेका रहेछन् र उनले त्यो धेरै पहिलेको कुरा भएको हुनाले आपूmले बिर्सिसकेको बताएका थिए ।)
त्यसपछि हामी दुई, हाम्रा कोषाध्यक्ष र म नौ सयको थैली कम्मरमा बाँधेर हुमपुङ फर्कियौँ । त्यसको केही समयपछि मैले सञ्चालक समितिलगायत गाउँलेहरुसित बिदा मागेर भरतपुरतिर लागेँ, जहाँ म एकैचोटि दस कक्षामा भर्ना भएर त्यही कमाइको भरमा एक वर्षसम्म अध्ययन गरेँ ।
मैले पहिले धादिङ र अहिले चितवन जिल्लाअन्तर्गत पर्ने दूरदराजको गाउँ हुमपुङ छोडेको पनि अहिले त साढे पाँच दशकभन्दा बढी समय नाघिसकेको छ र त्यस समयका कतिपय कुराहरु समेत विस्मृतिको गर्तमा बिलाइसकेका छन्, तर मैले त्यतिबेला हात समातेर क, ख सिकाएका साथीजस्ता मेरा प्रिय विद्यार्र्थीहरु गिरिराज पाठक, भरतराज पाठक, बुद्धिराज पाठक, एकराज पाठक, लोकनाथ तथा घनश्याम उप्रेती, गोविन्द पाठक, कृष्णा पाठक आदि र मलाई आफ्नो छोरालाईझैँ स्नेह गरेर दूधभात खुवाउने टोपनाथ पाठक दाजु र भाउजू गोविन्दका मातापिता आदि अहिले पनि बारम्बार मेरो स्मृतिपटमा खडा हुन आइपुग्छन् र म ती सबै प्रियजनलाई उत्तिकै प्रेम र आदरपूर्वक सम्झिइरहन्छु ।
(टोखा–७, धापासी, काठमाडौँ)